Home Qubanaha Qisadii Peter Jackson Iyo Tuugii Diyaaradda
Sir Peter, oo ah ninka xukuma filimada Lord of the Rings, wuxuu aad u xiisaynayay inuu daawado diyaaraddo qaali ah oo aan caadi ahayn oo dul heehaabaya wadankiisa New Zealand, halkaas oo uu ku beeray calanka Dunida Dhexe lix ka mid ah filimada khiyaaliga ah ee ugu guulaha badan abid.
Si loo dhiso loona tijaabiyo mashiinadiisa duulaya, wuxuu shaqaalaysiiyey Maraykan xariif ah oo leh muuqaal casri ah iyo sooyaal hadh leh. Labaduba waxay noqdeen saaxiibo dheereeya, iyagoo ku xidhan jacaylkooda diyaaradda quruxda badan.
Sannadihii sii socday, si kastaba ha ahaatee, duuliyaha ayaa cadeeyay inuu yahay budhcad-xeeladaysan, oo usoo baxay si uu u qabsado giraanta awoodda, isaga oo xoqaya waxyaalaha foosha xun ee uu u dhisi lahaa Sir Peter.
Tartankii ugu dambeeyay, Duuliyaha Mugdiga ah wuu soo dhowaaday wuxuuna ku dhowaaday inuu baxsado. Laakiin markii ugu dambaysay ee daruuraha la marayay, Sir Peter wuu kacay, isagoo u eeg sida Bakayle ku jira tartan khiyaali ah, dhamaantood waa kuwo la jecelyahay oo caga cad, wuxuuna diray budhcad diyaaradeed si ay dhulka ugu dhacaan.
Xaqiiqdii, iska horimaadka cakiran ee labada nin wuxuu ka dhacay qol cidhiidhi ah, oo aan daaqad lahayn maxkamad ku taal Wellington, New Zealand. Wiilka dalka ugu caansan Jackson waxa uu ku jiray sirdoonka loo yaqaan Sir Peter sanadkii 2010.
Marmar kabo la’aan ayuu socdaa. Laakiin xagaagii 2019, wuxuu si lama filaan ah u yimi isaga oo xidhan Maxkamadda Sare ee Wellington si uu uga markhaati kaco maxkamadaynta burcad-badeednimada ee saaxiibkiis hore Eugene DeMarco.
Lixda dacwadood ee dambiga ah, ayaa lagu qaaday, kuwaas oo kala ahaa, xatooyada iyo iibinta laba kamid ah taranka Jackson ee Dagaalkii Koowaad ee Aduunka in kabadan $ 1 milyan iyo sidoo kale lacag $ 500,000 oo saaxiib uu siiyay inuu ku iibsado diyaarad kale oo taariikhi ah, asaga oo wakiil ka ah, ka dibna xafidaya lacagta iyo diyaaradda labadaba. , isagoo adeegsanaya kan dambe si uu amaahda bangiga u helo.
“Waan ka helay isaga,” ayuu Jackson u sheegay xeerbeegtida maxkaamdda, ku dhowaad 14 sannadood, Waagii hore, wuxuu yidhi, Gene marwalba wuu awooddaa inuu wax walba igala hadlo.” Laakiin markaa, Jackson ayaa tiriyay, waxyaabo is beddelay. Intii uu DeMarco fadhiyey qolka maxkamadda, wuxuu maqlay taliyihiisii hore oo lagu tilmaamo nin qunyar-socod ah oo waxyaabo been-abuur ah ku wareegya, isagoo ku wareejinaya dadka. DeMarco, sidii la ogaaday, waxay lahayd taariikh duullimaadyo duufaan ah.
Muddo sanado ah, DeMarco waxaa loo yaqaanay geesinimo, duulaya gurrada iyo duullimaadyada muuqaalka tartanka hawada ku jira ee Hollywood, isagoo caan ku ahaan lahaa duuliye caan ah oo filimo iyo xayeysiis ah, kuwaas oo uu ugu dambeeyay duulimaad diyaaradeed oo loogu talagalay filimkii ugu dambeeyay ee James Bond, No Time to Die.
Intii lagu gudajiray bulshada yar yar ee adduunka ee ka soo horjeedda duulimaadyadda, wuxuu sii wadaa in lagu hayo cabsi, balse ay jiraan in badan in ay u tixgeliyaan inuu yahay fallaagadii ugu waxqabadka badnayd ee diyaarado Dagaalkii Koowaad ee Adduunka.
Haddii Peter Jackson uu filim ka sameeyay, sheekadu waxay u dhici kartaa sidan, sidaa waxa yidhi, qoraaga sheekada, By Marc Wortman, farshaxanka sawirada waxa leh Corey Brickley,waxaana soo Turjumay Arraale M Jaama.
Previous articleSomalia records 198 new coronavirus cases
Next articleTaiwan oo laba milyan ku bixinaysa doorashada Somaliland
Xogta: waddan Boqortooyadii casilay oo madaxweyne doortay
Kulankii gaashaanbuurta NATO oo fashilmay
Xogta Sirdoonka Israel ee basaasay hubka Turkey
USA: askari Somali ah oo dub loo xukumay dil uu geystay
Eithiopia oo Somaliland u gacangelisay dad dembiilayaala
“Amarka shirka lagu joojay madaxweynuhu kaso baxay” Cabdi Good
Kelyaha doofaarka oo lagu guulaystay in aadamaha loo gelin karo
Sudan: xiisadda dibadbaxayal kala taageersan Milateriga iyo Rayidka